Trump ayaa sheegay inuu ka badbaadiyey Mohamed bin Salman kiiskii dilka ahaa ee Khashoggi… – Hagaag.com
Trump ayaa sheegay inuu ka badbaadiyey Mohamed bin Salman kiiskii dilka ahaa ee Khashoggi…
Buug cusub oo uu qoray wariyaha caanka ah ee lagu magacaabo Bob Woodward oo la yiraahdo “Rage” isalamrkaana dhawaan soo bixi doona ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in uu isaga ka bad-baadiyay dhaxal-sugaha dalka Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan kiiska dilka ah ee loo geystay wariyihii Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi.
Nuqul ka mid ah wareysi uu Trump siiyay wariyahan oo ku qoran buugan cusub oo soo bixi doona isbuuca dambe ayuu Trump waxa uu ku qaatay libinta in meesha laga saaro eeda dilka wariyaha ee la rabay in loo saariyo dhaxal-suge Maxamed Bin Salmaan.
Trump ayaa difaacay Maxamed Bin Salmaan, sida ku qoran buugga: “- Aniga ayaa bad-baadiyay, waxaan ku qanciyay kongareeska in ay ka leexdaan oo ay afaarihiisa ka baxaan”, ayuu yiri Trump.
Sababta uu u difaacay ayuu ku sheegay in Sacuudigu yahay tubada lacagta ee Mareykanka islamarkaana sannado yar gudahooda ay Mareykanku wax kaga iibsadeen lacag kor u dhaafeysa 400 oo bilyan oo dollar.
Bishii Oktober, 2018 wariye Khashoggi oo deegaan ahaan daganaa Mareykanka ayaa lagu ballamiyay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul oo uu dano ka yeeshay, halkaas oo loogu sii diyaariyay koox wax disha oo ka socota sirdoonka Sacuudiga.
Dhawaan ayay aheyd markii maxkamad ku taal Sacuudiga ay ka laabatay dil lagu xukumay xubno lagu eedeeyay dilka wariyaha kuwaas oo xabsi loogu baddalay sababo la xiriira qoyska Khashoggi oo iska cafiyay.